Nhau - Mashandiro Aungaita Iyo Roll Kuisa Heat Heat Machine?
Maitiro Ekushandisa Iyo Iyo Roll Kutenderera Yekushisa Press Machine?
1. Ita shuwa kuti unobatanidza magetsi matatu phase simba mushe. Dhinda bhatani rekuti "Blanket Enter", gumbeze richaswedera padhiramu uye "Blanket Action Indication" irambe ichivhenekwa nemaaramu panguva imwe chete. Mushure megumbeze rakabatirira padhiramu, "Blanket Action Indication" mira zvinotyisa. Dhinda bhatani "kutanga", muchina unenge uchimhanya.
Seta iyo "FREQ SET" (Speed) 18 kutenderera.Can isingasviki pane gumi Zvikasadaro mota inogona kutyorwa. (REV ndiyo inodzosera kumashure, FWD iri kumberi, MIRA / KUGADZIRA isipo. Muchina EX-fekitori marongero ari "FWD" .Hapana chikonzero chekuchichinja.FREQ SET inowanza marongero)
3. Panguva yekutanga, iwe unofanirwa preheat muchina sezviri pazasi:
1) Seta tembiricha kusvika 50 degree Celsius, painopisa kusvika pamadhigiri makumi mashanu, mirira maminetsi makumi maviri.
2) Gadza 80 ℃, mushure mekupisa kusvika pamadhigiri makumi masere, mirira maminetsi makumi matatu.
3) Set 90 ℃, mushure mekupisa kusvika 95 degree, mirira maminetsi makumi matatu.
4) Gadza 100 ℃, mushure mekupisa kusvika pamadhigirii zana, mirira maminetsi makumi matatu.
5) Gadza 110 ℃, mushure mekudziya kusvika pa110 degree, mirira maminetsi gumi nemashanu.
6) Seta 120 ℃, mushure mekupisa kusvika padigirii zana, mirira maminetsi gumi nemashanu.
7) Setha 250 ℃, kupisa chaiko kusvika ku250 ℃
Rega muchina umhanye ne250 ℃ pasina kuita kupisa kwemaawa mana.
4. Kechipiri nguva iwe unogona kuseta tembiricha kuti ive zvaunoda zvakananga. Kana iwe uchida 220 ℃, isa iyo 220 ℃ uye 15.00 kutenderera.
Mushure mekupisa kupisa kusvika pamadhigirii mazana maviri nemakumi maviri, pinda bhatani rekuti "Pressure switch" mabhatani maviri erabha anodhinda gumbeze kuti gumbeze rinamatire padhiramu. (Matipi: muchina unoda kubatana necompressor yemhepo)
5. Kana iyo jira yakatetepa, ndapota mhanya nemapepa ekudzivirira kuti ingi isapinda mugumbeze.
6.Kubudirira sublimation inoda yakakodzera nguva, tembiricha uye kumanikidza. Ukobvu hwejira, sublimation bepa mhando uye machira emhando zvinokanganisa iwo sublimation mhedzisiro. Edza zvidimbu zvidiki mune tembiricha dzakasiyana uye nekumhanya pamberi pekutengesa kugadzirwa.
7. Pakupera kwezuva rekushanda:
1) Chinja kumhanya kwedhiramu kuti ikurumidze kuve 40.00 kutenderera.
2) Dhinda "otomatiki Shut pasi". Dhiramu rinomira kudziya uye dhiramu harizomhanye kusvika temp. ari 90 ℃.
3) "Mira" bhatani rinogona kudzvanywa pakaitika EMERGENCY mamiriro. Gumbeze racho rinongoerekana raparadzana nedhiramu.Mufambo wegumbeze nedhiramu zvinokwana 4cm. Kana iwe uine zvimwe zvinokurumidza uye uchida kubva kufekitori kamwechete, unogona kudzvanya "mira" bhatani zvakare.
ONA: Ita shuwa gumbeze rakaparadzaniswa zvachose nedhiramu.
1. Mushini wekumhanyisa haugone kudzika kupfuura gumi, zvikasadaro mota yacho inogona kutyorwa.
2. Kana simba rangoerekana radzimwa, unofanirwa kupatsanura gumbeze kubva kudhiramu nemaoko kudzivirira kubva pakutsva. (inofanirwa kuve yekutarisa uye ive nechokwadi chekuti yakaparadzaniswa zvachose)
3. Otomatiki gumbeze kurongedza system, iwe unofanirwa kuita iko kunongedza nemaoko kana otomatiki system yaputsika.
4. Kana muchina ukatanga kupisa, dhiramu rinofanirwa kunge richimhanya kudzivirira gumbeze kutsva.Zvaive nani kuti mushandi aripo pakuita kupisa.
5. Mumamiriro ekupisa akakwirira, akadai sekumira kwechimbichimbi kana kudzimwa kwemagetsi, gumbeze rakaparadzana kubva kudhiramu kamwechete.
6. Mabheyaringi anofanira kuzorwa mafuta "emafuta" vhiki rega rega, izvo zvinovimbisa kutenderera kwakajairika kwekutakura.
7. Chengeta muchina wakachena kunyanya mafeni, slip ring uye kabrashi brashi nezvimwe.
8. Zvakajairika kuti chiratidzo mwenje kupenya uye buzzer mhete kana gumbeze ririkupinda.Pakati peuslim, mwenje wechiratidzo flash uye alarm dzimwe nguva nekuti gumbeze kurongedza kunoshanda.
Post nguva: Apr-01-2021